အာရပ်ကျန်းမာခြင်း - Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း
Home/စာတိုက်/Uncategorized/အာရပ်ကျန်းမာခြင်း - Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း
အဆိုပါ Tekna Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း display ဟာ၏နေ့နှစ်ခုအပေါ်ကအရမ်းအလုပ်များဖြစ်ပါသည် အာရပ်ကျန်းမာရေးပြပွဲ နှင့်ကွန်ဂရက် 2018! Tekna သစ်ကို International ၏ရာပေါင်းများစွာဖန်ဆင်းတော်မူပြီ ဖြန့်ဖြူး အလွန်ကြီးမားနေတဲ့အရေအတွက်ကရောင်းချခဲ့ဆက်ဆံရေးနှင့် Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း Monoplace အပါအဝင်စနစ်များနှင့် Multiplace Hyperbaric ကုန်သည်များ။ တို့က လာ. , Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများနည်းပညာအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဖတ်ရှုပါ။ Tekna တဲအတွက်ခင်းကျင်းပြသတဲ့ Hybrid ကို 4000 Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများရှိပါတယ် ဤတွင် Z1.C02!
By teknamfg|2018-01-31T10:41:11+00:00ဇန်နဝါရီလ 31st, 2018|Uncategorized|ဟာ Off comments Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း - အာရပ်ကျန်းမာရေးအပေါ်